ANDOHATAPENAKA : Sarona ny mpisakaiza nisoloky vary 70kg teny eny amin’ny “gare routière”
Mirongatra be izay tsy izy ary miseho amin’ny endriny maro ny trangana fisolokiana eto an-drenivohitra ankehitriny. 18 octobre 2019
Araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny Polisim-pirenena omaly, dia fantatra fa mpisakaiza lehilahy manodidina ny 45 taona sy vehivavy 35 taona no malaza ratsy amin’ny fisolokiana eny amin’ny “gare routière” Andohatapenaka ary efa betsaka ny lasibatra tamin’izany raha ny fitarainana voaray ihany. Ny alarobia lasa teo tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany maraina no tra-tehaka ireto olon-dratsy ireto raha nokarohina efa ela izay fiaraha-miasan’ny Polisy sy ny mpiambina teny amin’ny manodidina ny tobim-piantsonana eny Andohatapenaka hatrany.
Raha tsiahivina dia ny 28 septambra 2019 lasa teo no anisany nanatanterahan’izy ireo ny asa ratsiny tamin’ny halatra vary amin’ny gony milanja 70 kg. Vary izay vatsina mpianatra eny Ankatso nalefan’ny ray aman-dreniny avy any Miarinarivo nalefa tamina taksiborosy no lasan’ireto mpivady rehefa napetraka tao amin’ny biraon’ny kaoperativa nitondra azy. Nilaza mantsy ireto farany fa azy ireo ny vary koa dia nanome tsy an-kisalasala ihany koa ny nametrahana ny entana rehefa voalangolango tamin’ny fahaizan’izy mivady niresaka. Tamina horonan-tsary maro voatahiry hita tamin’ny “caméras de surveillance” no vao mainka nahamora ny fisamborana ireto mpisakaiza nisoloky ireto ary dia tsy afa-nandositra intsony sy niaiky ny heloka vitany izy ireo.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (173) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (94) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (91) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (84) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (80) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (72) 22 mai 2020